Momba anay - Jiangxi Sanxin Medtec Co., Ltd.
Jiangxi Sanxin Medtec Co., Ltd., kaody tahiry: 300453, natsangana tamin'ny taona 1997. Orinasa teknolojia avo lenta nasionaly manokana amin'ny fitaovana R&D, famokarana, varotra ary serivisy.Rehefa 20 taona mahery nangonina, ny orinasa dia manana fomba fijery manerantany, manaraka akaiky ny fampandrosoana ny firenena paikady, manaraka akaiky ny filan'ny klinika, miankina amin'ny rafitra fitantanana kalitao tsara sy ny tombana R&D matotra ary ny tombony amin'ny famokarana, ary izy no nitarika ny indostria hamaky ny rafitra CE sy CMD kalitaon'ny fitantanana sy ny fanamarinana ny vokatra ary ny alàlana ara-barotra amerikana FDA (510K). Mivoatra am-pahazotoana sy mikatsaka ny hatsarana, dia lasa orinasa voatanisa ao amin'ny sehatry ny fanadiovana rà ao an-trano ho an'ny vahaolana amin'ny sehatry ny indostria iray manontolo. Io ihany koa no orinasa voalohany sy hany lisitra ao amin'ny indostrian'ny fitaovana fitsaboana any amin'ny faritanin'i Jiangxi.
Nandritra ny 20 taona mahery, Sanxin Medtec dia nanatsara hatrany ny rafitry ny vokatra ary niova sy namboarina tamim-pahombiazana tamin'ny sehatry ny fampidirana nentim-paharazana, nanjary iray amin'ireo orinasa an-trano vitsivitsy izay afaka manome vahaolana ho an'ny faritry ny indostria manontolo amin'ny fanadiovana rà. Nanolotra serivisy mihoatra ny 120 tapitrisa heny izahay ho an'ny serivisy dialisis sy fanaovana vaksiny mihoatra ny 800 tapitrisa heny ho an'ny foibe fanaraha-maso ny aretina. Manana mari-pahaizana 80 momba ny patanty mihoatra ny 80 izahay izao, mari-pankasitrahana fisoratana anarana mihoatra ny 80 ary nandray anjara tamin'ny famolavolana fenitra nasionaly sy indostrialy 10. Ny vokatray dia amidy amin'ny firenena sy faritra maherin'ny 60. Ny orinasa mazoto mizaha lamina vaovao amin'ny fampandrosoana indostrialy ary nametraka lamina fampandrosoana nasionaly mifototra amin'ny Jiangxi. Ny vokatra lehibe ao aminy dia manarona andiany enina fanadiovana rà, kateter an-trano, tsindrona, fampidiran-dra, fandidiana cardiothoracic, ary fiarovana.
Taratasy fanamarinana Patent
Fanamarihana fisoratana anarana
Firenena sy faritra
Fenitra nasionaly / indostria
Atrikasa mandeha ho azy
Tao anatin'izay folo taona lasa izay, SANXIN dia namaly tamim-pahavitrihana ny fangatahan'ny tsena amin'ny famokarana marani-tsaina. Ampidiro ireo loharano anatiny ao amin'ny indostria ary atambaro ny teknolojia fampahalalana mba hamoronana vahaolana fitantanana atrikasa manan-tsaina. Mandritra ny fahazoana famokarana manan-tsaina dia mitondra anao koa ny fahafaha-manara-maso ny angon-drakitra tena izy, ny fanovana ny fotoana tena izy, ary ny fanamorana ny fanaraha-maso ny fotoana tena izy, izay mampihena tsikelikely ny fidiran'ny olombelona, ​​manatsara ny kalitaon'ny vokatra sy ny fotoana fandefasana azy ary mitondra fitantanana mety kokoa.